Caalamka, 01 June 2016
Arbaco 1 June 2016
Wargeyska The Guardian ee ka soo baxa London ayaa sheegay in laba ra’yi uruurin oo mid si Online lagu qaaday midna dhinaca taleefonka ay muujinayaan inay kordhayaan dadka British-ka ah ee doonaya in dalkaas uu ka baxo ururka Midowga Yurub.
Taliban oo 6 Qof ku Dishay Weerar Maanta Dhacay
Shan qof oo rayid ah iyo nin boolis ah ayaa la dilay kadib markii dagaalyahanada kooxda Taliban ay maanta weerar ku qaadeen xarunta maxkamad ku taalla bariga dalkaas.
Dagaallo ka Socda Agagaarka Falluja
Ciidamada Ciraaq iyo maleeshiyo Shiici ah, oo ay hawadan ka taageerayaan diyaaradaha Marykanka ayaa wada dagaal ay doonayaan inay ku qabsadaan magaalada Falluja. Ciidamada ayaa dhinac magaalada ka galay.
QM: Shiinuhu Ha joojiyo Rinjiga uu Africo u Diro
Dawladda Shiinaha ayaa hor joogsatay qaraar QM ay ku doonayso in lagu joojiyo nooc ka mid ah rinjiga guryaha la mariyo oo ay Shiinuhu u dhoofiyaan Africa kaasi oo halis caafimaad ku ah maskaxda caruurta.
Barakac ka Socda Magaalada Fallujah
Qoysaska ayaa ka qaxaya magaalada Fallujah ee dalka Ciraq, ayada oo dagaalyahanada kooxda Daacish ay ku qasbayaan inay guryahooda ka baxaan.
Muhaajiriin Badan oo ay Baddu Liqday
In kabadan 700 oo muhaajiriin ah ayaa laga walwal qabaa in ay baddu liqday iyaga oo u tahriibaya Yurub, sida laga soo xigtay hay’adda UNHCR
Dibadbaxyo Xoog Badan oo Ciraaq ka Socda
mudaaharaad midkan la mid ah oo toddobaad ka hor dhacay ayaa isu rogay dagaal kaasoo ay ku dhinteen afar qof oo ka mid ah dadkii mudaaharaadka dhigayay.
Taliban Oo Dooratay Hoggaamiye Cusub
Kooxda Taliban ee dalka Afghanistan ayaa sheegtay in Mawlawi Haibatullah Akhundzada loo magacaabay inuu noqdo madaxa cusub ee kooxdaas kadib geeridii Mullah Akhtar Mansoor.